Njem Gulliver: kpochapụwo akwụkwọ ụwa | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | Egwu efu, Akụkọ ihe mere eme, Novela
Njem Gulliver bụ akụkọ ịkpa ọchị, lere anya dị ka ọrụ kacha pụta ìhè nke onye Irishman Jonathan Swift dere. E bipụtara ya na Ọktoba 1726 ma kemgbe ahụ ewu ewu ya mere ka ọ bụrụ akwụkwọ ochie nke akwụkwọ ụwa. Odee wee dee ederede a dika ịkwa emo nke “akụkọ njem”, na-agbakwunye nkatọ siri ike banyere omenaala, usoro ọchịchị, yana okike mmadụ.
La nkwonkwo ọ bụ jupụtara n'echiche efu jiri ọchị na ichetụ n'echiche, n'ihi nke a, ọtụtụ na-eche na ọ bụ ọrụ ụmụaka. Onye bu nwanyi nke akụkọ a bụ Lemuel gulliver, dọkịta nke, n'ihi ọnọdụ ụfọdụ, kpebiri ịga njem. N’oge njem gị niile, ị ga - ebi ndụ dị egwu ma ị ga-ahụ mmepeanya anọ pụrụ iche, ha niile dị iche na nke gị.
1 Nchịkọta nke njem Gulliver (1726)
1.2 Njem mbụ
1.3 Njem nke abụọ
1.4 Nke atọ njem
1.5 Njem nke anọ
2 Nyocha biographical nke onye edemede
2.1 Ọmụmụ ihe na ọrụ izizi
2.2 Egwuregwu edemede
2.2.1 Ọrụ nke Jonathan Swift
Na nchikota nke Njem Gulliver (1726)
Njem Gulliver ...
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ satiriki nke a na-akọ ụzọ njem anọ nke dọkịta na-awa, onye ike gwụrụ nke usoro ahụ kpebiri ịmalite ọtụtụ njem ụgbọ mmiri. Ọrụ a ọ bụ kpochapụwo akwụkwọ a gbanwee ya n’ọtụtụ oge, ma maka fim, telivishọn, redio, na maka egwuregwu. Ọzọkwa, ndị edemede dị iche iche emeela ka akụkọ a dị na mbụ, ya na njem ọhụrụ ndị ama ama Lemuel Gulliver mere.
Lemuel Gulliver bụ dọkịta lụrụ di na nwunye dọkịta na-awa nwere ụmụ, Nwa afọ Nottinghamshire. Ọ ga-eme njem ugboro anọ ọ ga-ebi ịrịba e akpali akpali. N'ime nke ọ bụla n'ime ha, ị ga-ejedebe n'àgwàetiti ọzọ, ebe ị ga-ezute obodo anọ mepere emepe. Ihe ndị a ga - eme ka ị tụgharịa uche oge ọ bụla ị laghachi England wee jụọ ajụjụ banyere ndụ gị.
Na Mee 1699, Gulliver malitere njem mbụ ya, nke bụ maka ya banye na Antelope. Mgbe oke mmiri ozuzo, ụgbọ mmiri ahụ na-emikpu na Lemuel ga-egwu mmiri ike na-adịghị agwụ agwụ ruo mgbe ịchọrọ ala siri ike. Mgbe ọ gafere mmiri na-asọ asọ, ọ na-agba mbọ iru n'ikpere mmiri, ebe ọ na-ehi ụra n'ihi nnukwu mbọ a gbara. Onye na-eme ihe nkiri na-eteta ụra na nke obere mmadụ gbara ya gburugburu: ndị bi na Lilliput.
Ụbọchị na-esote, Gulliver zutere eze ukwu nke agwaetiti ahụ, onye ọ na-emetere ebere ma nweta obi ike. Ọ dịịrị ya mfe ime mgbanwe; ngwa ngwa muta asusu na omenala ohuru. Dọkịta bịara nwee mmasị n'ebe eze ukwu nọ nke ukwuu o kpebiri ịhapụ ya, ma admiral (onye ya na ya etinyeghị otuto) sabotaji ihe niile, nke mere na nnwere onwe nke ibu ahụ nwere ike ịdabere na ọnọdụ ụfọdụ, nke na-agaghị ekwe ka ọ laghachi n'ụlọ.
Ka oge na-aga, agha dara n'etiti ndị Lilliputians na alaeze Blefuscu. —Nyere ndị bi obere. Na-akwụ ụgwọ nke nnukwu ya, Gulliver weghaara ndị agha ndị iro, na-enweta ya aha nsọpụrụ. Mgbe ọjụjụ ịtụgharị Blefuscu ka ọ bụrụ ógbè Lilliput, Lemuel ga-amali elu n’etiti ya ruo mgbe ọ ga-enwe ike iweghachi ụgbọ mmiri hà ka ya nke ọ gbapụrụ wee laghachi England.
Njem nke abụọ
Ọnwa abụọ ka ọ laghachisịrị ezinụlọ ya, Gulliver kpebiri ịmalite njem ọhụụ, oge nke a na njem. Ọzọkwa, oké ifufe na-eme ka ụgbọ mmiri hapụ ụgbọ ya wee kwụsị n'agwaetiti Brobdingnag. N'ebe ahụ ka onye ọ bụla hụrụ otu nnukwu mmadụ, onye mere ka ndị ọrụ ahụ gbalaga n'ụjọ, ebe Lemuel gbara ọsọ gaa n'ọhịa.
N'ebe ahụ, Onye ọrụ ugbo dị ogologo 22 mita jidere Gulliver iji gosipụta dị ka ihe nkiri circus. Ọ na-eme ndokwa ịkpọrọ ya Queen, onye chọrọ ozugbo ka ya na ya nọrọ dị ka anụ ụlọ. N'ịbụ onye nọ n'obí eze, Lemuel ga-agabiga ọtụtụ ihe egwu n'ihi oke obere ya. N'ihi ọnọdụ dị ịtụnanya, ọ ga-ejikwa ike rute n'oké osimiri, ka ndị ụgbọ mmiri Bekee wee zọpụta ya.
Nke atọ njem
Ọnwa ole na ole ka e mesịrị - nke nsogbu ezinụlọ ụfọdụ kpaliri—, Gulliver kpebiri ịga njem ọzọ. Oge a, ndị ohi na-awakpo ụgbọ mmiri ahụ na mgbe ọ na-agba ọsọ ga-ejedebe na ala amaghi. Lemuel na-aga n'ókèala ahụ, na mberede, nnukwu ndò na-ekpuchi ya, mgbe ọ na-ele anya na mbara igwe, chọta agwaetiti na-ese n'elu mmiri n'elu ya. Mgbe ha rịọchara maka enyemaka, ụfọdụ ụmụ nwoke tụbara ụdọ ma jikwaa rịgoro.
Akpọrọ agwaetiti a dị omimi: Laputa, na obodo a na-edozi ihe niile site na egwu na mgbakọ na mwepụ. N’oge na-adịghị anya, ike gwụ Gulliver nke ndị ọbịa a ma rịọ ka eweghachi ha n’ụwa., ebe ọ gara Balnibarbi ụbọchị ole na ole. N'ikpeazụ ọ kpebiri ịlaghachi England, na-agafe Glubbdubdrib tupu ị gaa na onye anwansi, na mgbakwunye na izute ndị na-adịghị anwụ anwụ a na-akpọ struldbrugs.
Njem nke anọ
Gulliver ekpebiela ịnọ na England ma ghara ịga njem ọzọ. Mgbe oge gwụrụ, kpebiri ịlaghachi n'oké osimiri, n'oge a dị ka onye isi ụgbọ mmiri. N'oge na-adịghị anya mgbe ụgbọ mmiri gachara, Otu nnupụisi n’etiti ndị ọrụ ahụ dugara na Lemuel tọrọ atọ n’otu agwaetiti. N'ebe ahụ, ọ ga-ezute mmepe abụọ dị iche iche: Yahoos na Houyhnhnms, ndị nke abụọ bụ ndị na-achịkwa ókèala ahụ.
Yahoos bụ mmadu bi n'ime ohia, na-adịghị ọcha mgbe niile na, na mgbakwunye, enweghị ntụkwasị obi. Maka akụkụ ya, houyhnhnms na-ekwu ịnyịnya, nwere ọgụgụ isi ma na-eme ihe dabere na ezigbo ihe. Gulliver jikọtara n'ụzọ zuru oke na mmepeanya a, kwa ụbọchị ịjụ agbụrụ mmadụ na-abawanye; ọ bụ ezie na, n'ikpeazụ - megide uche ya - a laghachiri ya England.
Nyocha biographical nke onye edemede
Na Wednesde, Nọvemba 30, 1667, Obodo Dublin (Ireland) hụrụ ọmụmụ nwa e mere baptizim dika Jonathan Swift. Ndị mụrụ ya bụ Abigail Erick na Jonathan Swift, ha abụọ bụ ndị mbata bekee. N'oge na-adịghị anya tupu a mụọ ya, nna ya nwụrụ, na-akpali nne ya ịlaghachi England. Mana tupu ọ pụọ, nwanyị ahụ lara na-azụlite nke Jonathan kwuru na-elekọta nke Uncle Godwin.
Ọmụmụ ihe na ọrụ izizi
Ọ gụrụ akwụkwọ maka nwanne nna ya, ebe ọ bụ na ọ biri afọ ndị mbụ ya na oke ịda ogbenye. Ọ gụrụ akwụkwọ na Kilkenny School wee nweta nzere bachelọ nke Arts na Trinity College, Dublin.. Na 1688 ya na nne ya laghachi England, ebe ahụ, n'ihi ya o jisiri ike rụọ ọrụ dị ka odeakwụkwọ nke onye edemede na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ Sir William Temple, onye bụ onye ikwu dị anya na enyi nwanne nna ya Godwin.
N'ikwekọ n'ọrụ ya dị ka ụlọ elu nke Baronet Temple, Ọ gara n'ihu na agụmakwụkwọ mahadum ya wee bụrụ onye ụkọchukwu Anglịkan na 1694. N’ịbụ onye ike gwụrụ nke ịbụ onye pere mpe na a naghị ebuli ya elu, o kpebiri ịlaghachi Ireland iji wegha ụka parụ Kilroot. Na 1696, ọ laghachiri Moor Park - nke ụlọ nsọ kwenyesiri ike - iji dozie ihe ncheta ya na akwụkwọ ozi ya tupu ebipụta ya.
Swift na Sir Temple rụkọrọ ọrụ ruo mgbe ọ nwụrụ na 1699. N’afọ ndị ahụ enwetara nnukwu ahụmịhe na gburugburu ọchịchị, okpukpe na agụmagụ nke obodo ahụ, nke dugara ya ka ọ bụrụ onye dị mkpa na onye nwere mmetụta. Ọzọkwa, na na oge o dere oru mbu ya, Ọgụ dị n’etiti akwụkwọ ochie na nke oge a, nke e mechara bipụta n’afọ 1704.
Mgbe ahụ ederede nke ederede ya, otu afọ ahụ malitere na satirical ide site na ya nke abụọ n'akwụkwọ: Akụkọ banyere ebe a na-asa ahụ (1704). Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi-akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ ahụ Onye nyocha, ebe o bipụtara ọtụtụ isiokwu na-akwado ọchịchị Tory, nke ọ bụ onye ndụmọdụ na 1710 ruo 1714.
Na 1726, o jiri aha ya gosipụta ihe ga-abụ ọrụ ya kacha mma: Njem Gulliver. Nke a mere ka ọ bụrụ otu n'ime ndị nkwado kachasị mkpa n'ụwa. Site na akuko ihe omuma a, Swift mere mkpọtụ nke akwụkwọ njem a na-ewu ewu n'oge ahụ, nke ọ na-edetu ụdị misanthropic nke e ji mara ọtụtụ ọrụ ya.
Ọrụ nke Jonathan Swift
Ọgụ dị n’etiti akwụkwọ ochie na nke oge a (iri na otu)
Akụkọ banyere gbọmgbọm(1704)
Omume nke ndị enyi(1711)
Akụkọ banyere gbọmgbọm (1713)
Akwụkwọ ozi Ragman(1724)
Njem njem nke Gulliver (1726)
Nkwupụta dị mma (1729)
Site na 1738 Swift malitere ịrịa ọrịa dị omimi, nke a na-ewere dị ka ihe na-adịghị mma na ọdịdị. Ka ọ na-erule afọ 1742, akpụ anya mere ka ọ ghara ịgụ ya. Mgbe ọ chọpụtara ọnwụ ya, o kwuru, sị: "Oge eruola mgbe m ga-ahapụ ụwa a: M ga-anwụ n'iwe, dịka oke oke nsi n'ime ya."
Jonathan Swift nwụrụ na Ọktoba 19, 1745 ma hapụrụ ndị ogbenye ọtụtụ n’ime akụnụba ya. Ozu ya zuru na Katidral St. Patrick na Dublin.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Njem Gulliver
Rafael Caunedo. Ajụjụ ọnụ nke odee akwụkwọ nke ọchịchọ maka ihe ọghọm
Pierre Reverdy. Afọ ncheta ọnwụ ya. Eke